Kooxda Qaranka Uganda oo ku guuleesatay koobka Cecafa - Caasimada Online
Home Warar Kooxda Qaranka Uganda oo ku guuleesatay koobka Cecafa
Kooxda Qaranka Uganda oo ku guuleesatay koobka Cecafa
Kampala (Caasimada Online) Kooxda qaranka kubada cagta waddanka Uganda ayaa galabta ku guuleesatay koobka bariga iyo bartamaha Africa ee Cecafa.
Kooxda ayaa cayaartii ugu dambeesay waxay la yeelatay kooxda qaranka Kenya ee Harambee Stars.
Ciyaarta oo ka dhacday garoonka Namboole Stadium ee caasimada Kampala ayaa waxa ay ku bilaabatay dar-dar iyo jari deggannaan ah.
Ciyaarta oo socota 27-daqiiqo ayaa kooxda qaranka Uganda waxa ay heleen goolkii koobaad, laakin wuxuu ahaa gool uu iska dhaliyay ciyaaryahanka Kimani, laakin kooxda Kenya ayaa bar-bareesay daqiiqadii 87-aad, waxana u dhaliyay Lavatsa.
Ciyaarta oo ay weerrar iyo weerrar ku socota, dad badana ay aaminsanaayeen in ay ku dhammaan karto 1 iyo 1, ayaa daqiiqadii 90-aad waxa kooxda Uganda ay dhalisay goolkii guusha waxana dhaliyay Kizito.
Taageerayaasha kooxda Uganda oo ku faraxsan koobka ay hanteen caawa
Kooxda Uganda waa koobkii 13-aad oo ay ku guuleesato tartanka bariga iyo bartamaha Africa, waana kooxda ugu badan ee koobkan hanatay.
Kooxda Uganda ayaa hannan doonta adduun lacageed oo gaaraya 30,000 oo dollar oo dhigan (ku dhawaad sh81 million) halka kooxda Harambee Stars ay iyana jeebka gashan doonto 20,000 oo dollar.
Kooxaha ka qaybgalay koobkan waxa ka mid ahayd Soomaaliya oo seddaxdii cayaar laga adkaaday.